izivikeli zesikrini ezihamba phambili ze-google pixel 5
none Izindaba Nokubuyekezwa Izivikeli zesikrini ezihamba phambili ze-Google Pixel 5
Izivikeli zesikrini ezihamba phambili ze-Google Pixel 5
Ngenkathi umhlaba wezobuchwepheshe ulwela ukuxazulula iphazili ye-smartphone esongekayo futhi uqhubeka nokuxhaphaza ukwakhiwa kwefoni yesangweji lengilazi, iGoogle ihamba ngendlela yayo. Amadivayisi wePixel amasha alapha ngokusemthethweni futhi awasafani nsejwayelekile. IPixel 5 ifaka i-100% aluminium emuva, embozwe nge-resin kepha isekela ukushaja okusheshayo namanje . Ungazibuza ukuthi kungenzeka kanjani lokho futhi kunempendulo yalokho kusixhumanisi esingenhla kepha manje sizokhuluma ngabavikeli besikrini.
Ake sithi u-ode ngaphambilini i-Pixel 5 yakho ngo- $ 699 (ukuthumela kuqala ngoNovemba 29) kanye nokuhle Ikesi le-Pixel 5 ukuvikela umshayeli wakho omusha wansuku zonke. Sekuyisikhathi sokushaya umvikeli wesikrini esihle wePixel 5 (futhi mhlawumbe nesivikelo selensi yekhamera) futhi uvikele ngokuphelele i-smartphone yakho eyigugu. Njengenjwayelo, sikwenza kube lula ukuthi ukhethe, ukufaka kuhlu izivikeli zesikrini zePixel 5 ezinhle kakhulu okwamanje okwamanje.
I-Google Pixel 5 Buka intengo Thenga e-Amazon $ 69999 Thenga kwaBestBuy
Amacala amahle kakhulu we-Google Pixel 5
I-Google Pixel 5 isemthethweni: ifoni ye-Android yabantu abaningi
Amadili weGoogle Pixel 5, amanani entengo yokuhweba nokutholakala kwaVerizon, T-Mobile, AT&T, nakuBest Buy
I-Google Pixel 5 vs Apple iPhone 11
IGoogle Pixel 5 vs Samsung Galaxy S20 FE
UMvikeli Wesikrini Esilukhuni Sengilazi
I-ZAGG Glass Elite VisionGuard +
Isivikeli Sesikrini se-UniqueMe Esilukhuni se-Google Pixel 5
UMvikeli Wesikrini se-EGV weGoogle Pixel 5
Umvikeli wesikrini se-LK + Umvikeli welensi yekhamera
Awukwazi ukungahambi kahle nge-Spigen - amacala abo kanye nabavikeli besikrini abagcini nje ngokuqina ngekhwalithi nokuqina kepha beza ngamanani amakhulu futhi. Lesi sivikeli sesikrini se-Spigen Tempered Glass Pixel 5 siza silinganiswe ngobulukhuni be-9H futhi sihambisana nayo yonke ikesi le-Spigen Pixel 5 laphaya. Kukhona okokugqoka kwe-oleophobic ukusiza ngalawo ma-smudges, futhi isivikeli sesikrini sinikela ngokubuka okucacile okusicwecwe kuso sonke isikrini. Uhlaka lwe-AlignMaster olufakwe ama-apos ephakeji luqinisekisa ukufakwa okungenazinkinga. Okokugcina, uthola ezimbili zalezi zingane ngentengo enkulu.
Lesi sivikeli sesikrini sePixel 5 sisebenzisa ingilazi ye-aluminosilicate okuyi-ion exchange tempered enikezela ukuqina okuphezulu nokumelana kokuqala. I-ZAGG isebenzisa ubuchwepheshe bayo be-Kastus anti-microbial obulala kuze kufike kuma-95% we-coronavirus yomuntu kanye nama-99.9% we-Staph and E. coli surface bacteria esikrinini sakho. Akunakusho ukuthi, leli ikusasa eliwusizo kakhulu esimweni samanje sobhadane somhlaba wonke. IGlass Elite VisionGuard + iza nethileyi lokufaka ukuqinisekisa ukuqondanisa okunembile, futhi ifaka imiphetho eqinisiwe ukuvikela amakhona asemaphethelweni nemiphetho yesikrini. Ubuchwepheshe be-VisionGuard busebenzisa ungqimba olukhethekile lwe-Eyesafe oluhlunga ukukhanya okuyingozi kwamandla amakhulu okubonakalayo (i-HEV) kusuka esikrinini sefoni yakho.
Thenga isivikelo sesikrini seZAGG Glass Elite VisionGuard + Pixel 5 kwaBestBuy ngo- $ 24.99
Okunye okuhle ngabacabanga isabelomali. Umvikeli wesikrini se-UniqueMe Pixel 5 unikela ngakho konke okudingayo ngentengo emangalisayo. Ilinganiswe ngo-9H esikalini sokuqina kwepensela, inikela ngokuvikelwa okuphezulu kusuka kumaconsi, ukuklwebheka, ukuklwebheka. Iphinde futhi ibe ne-nanostatic yamahhala, i-oleophobic yokulwa izigxivizo zeminwe, futhi ine-99.9% yokudlulisa ukukhanya ukuze kube nokubukwa okuhle. Uthola amasileti amathathu engilazi ephaketheni, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke nangekusasa.
Enye ikhambi elingabizi kakhulu livela ku-EGV. Iphakethe lifaka amaphilisi amathathu engilazi anobulukhuni be-9H, ingubo emelana neminwe, futhi kukhona nethuluzi elikhethekile lokuqondanisa ukufakwa okulula nakho. Isivikeli se-EGV tempered glass Pixel 5 siyamelana nokuklwebheka, futhi konke kungumbhoshongo omkhulu wenyamazane. Isivikeli sesikrini senzelwe ukuba sincane kunesikrini sangempela sokuhambisana kwamacala nokuqina, ngakho-ke khumbula lokhu.
Kwesinye isikhathi icala nesivikelo sesikrini asivele lisike. Kukhona i-bump yekhamera ehlale inkulu kakhulu futhi udinga ukushaya ingilazi nayo. I-LK inesixazululo senkinga - inikeza iphakethe elihambisanayo labavikeli bamalensi amathathu ekhamera ukuhamba nabavikeli besikrini bengilazi ezintathu zePixel 5. Zonke izingcezu zengilazi zenziwe ngengilazi emnene engu-9H ekwazi ukumelana nokuklwebheka, futhi kukhona ithreyi lokufaka ebhokisini futhi.
lg g3 ukuthepha kabili akusebenzi
impande ye-galaxy note 3 verizon
Uhlu lwadlalwayo lwe-YouTube Music 'Replay Mix', olufana ne-Spotify & apos; 'On Repeat', selukhishelwa abasebenzisi
I-Samsung Galaxy Buds + vs AirPods Pro, i-AirPods, iJabra Elite Active 75t
Imidlalo engu-15 evuleke kakhulu emhlabeni enehluzo ezinhle ze-Android ne-iOS
I-Samsung Galaxy S8 + vs i-Galaxy Note 5
I-HTC 10 vs Samsung Galaxy S7 onqenqemeni
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zekhamera ze-iOS ezikuvumela ukuthi udubule i-RAW ku-iPhone 7, 7 Plus, SE, 6s noma 6s Plus yakho
I-Deal-o-rama: Izaphulelo zeVerizon iningi lama-smartwatches alo we-Moto 360 2nd Gen ngaphezu kuka-30%
Intengo yesitolimende ye-Apple iPhone 5s ne-Apple iPhone 5c ku-AT & T naku-T-Mobile iveziwe
AbakwaSony baveza ama-earbuds weqiniso angenantambo nge-Extra Bass nama-headphone amasha okukhansela umsindo
Ungathengi i-OnePlus 8 ne-Pro engakhiyiwe ukuze isebenze kuVerizon 5G